Nlele ihu akwukwo agaghi anwu | Martech Zone
Saturday, December 2, 2006 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Ana m asọpụrụ Steve Rubel, ma m na-ekwetaghị na ya ugbu a post na-ekwu na na-eru nso ọnwụ nke ibe page site na 2010. Steven kwuru, sị:
A ga-eji Ajax, Flash na teknụzụ mmekọrịta ndị ọzọ na-eme ka ndị ọrụ rụọ ọrụ niile n'ime otu ibe weebụ - dịka Gmail ma ọ bụ Google Reader. Nke a na-ewepụ mkpa ọ dị ịpị site na ibe peeji ọzọ. Ngwa wijetị nke weebụ ga-emezi nke a.
Nke a abụtụghị ikpe ma ọlị. Nile nke isi nchịkọta ndị ọrụ nwere ụzọ nke ijikọ echiche peeji site na ntinye ederede ndị ahịa. N'ezie, echere m na nchịkọta ụlọ ọrụ abụwo n'ihu nke usoro, na-esi na log-parsing gaa ahịa-n'akụkụ scripting afọ ndị gara aga. Ugbu a, ha na-enye ike izipu mgbanwe ndị ọzọ na nchịkọta enjin nke na-achọpụta mmekọrịta ndị ahịa nke ọma.
Aga m ekwupụta na nkọwa nke 'ibe' ga-agbanwe. Otu ibe nwere ike ịbụ akụkụ nke ibe, wijetị, ndepụta, wdg. Mkparịta ụka nke onye ahịa ka gosipụtara n'ụzọ ziri ezi n'ụzọ a, n'agbanyeghị. Ebe onye ahịa ga-pịa njikọ ma nwee ihuakwụkwọ ọhụụ gosipụtara n'ihu, ugbu a, ha pịa njikọ njikọta ahụ. Nke a ka bụ mmekọrịta yana enwere ike ịtụle ya nke ọma.
A na-atụle ihe oriri RSS n'ụzọ ziri ezi site na ngwa dịka Feedburner, nke na-edegharị ndepụta gị site na injin ha maka mmesho. Wijetị na-emepe emepe nke ha nchịkọta Injin, dị ka a hụrụ na ebe a Onyeka Onwenu. Flash nwere ike iji ohere ọ bụla / mmekọrịta ndị a na nchịkọta ụlọ ọrụ.
Ka ihe atụ: Payraise mgbako (otu n'ime saịtị m), wuru ya na Ajax. Mgbe onye ọrụ pịa “Gbakọọ” ma m na-ebuputa ngụkọta nke emechara na ibe mbụ, ana m enyefe ozi ahụ na Google Analytics. Mgbe m lere nchịkọta Google, enwere m ike ịhụ n'ụzọ ziri ezi mmadụ ole gara na saịtị ahụ, yana ole 'ihu akwụkwọ' e gburu. (Anaghị m ejide ngụkọta ahụ, agbanyeghị!).
Amụma m? Ka ọ na-erule afọ 2010, ụlọ ọrụ nchịkọta ga-egosi n'ụzọ ziri ezi ihe ngosi peeji maka ojiji ọ bụla nke ọdịnaya ma ọ bụ saịtị gị… Flash, Ajax, ma ọ bụ Wijetị. Elekere na-akụ na ngwa ndị ọzọ a nke na-eme nke a ugbu a. Kedu ga- mgbanwe bụ nghọta anyị banyere ihe 'ihu akwụkwọ' bụ n'ezie. Ọ bụ ezie na e weere ya na peeji nke ihe nchọgharị niile na mbụ, ọ ga-abụ mmụba nke mmekọrịta na saịtị weebụ. Agbanyeghị, mmekọrịta ahụ adịchaghị mkpa maka ahịa ma ọ bụ onye mgbasa ozi.
Na nkwanye ugwu niile, Steve, aga m eji ọlyụ tinye gị nri abalị nke ọma karịa ọdịiche anyị!
Tags: Analyticsihu peeji
Dee 3, 2006 na 12: 49 AM
Ekwenyere m na gị ebe ahụ nkọwa nke ibe ga-agbanwe. Ọ na-agbanwe agbanwe site na mgbe a tụụrụ ime atụmatụ nke obere akpa.
Agbanyeghị, echere m na ọnụọgụ dị ka nlele peeji bụ naanị nke elu elu. N'ikpeazụ mgbasa ozi ga-arụ ọrụ ọ bụghị n'ihi okporo ụzọ mana n'ihi ole ole pịa ya ma mee azụmahịa ahụ. Nke a pụtara na mgbasa ozi aghaghị ịchọ maka okporo ụzọ dị mma ma ọ bụghị naanị okporo ụzọ.
Nov 1, 2011 na 10:37 PM
Ọ dị m ka ya bụrụ na Steve Rubel kpọọrọ m gaa nri abalị ahụ!